Dowladda Federalka oo xirtay Xarumaha Shirkadda CAMEL FOREX ee Ganacsiga Online-ka ah iyo Sarifka lacagaha - Awdinle Online
Dowladda Federalka oo xirtay Xarumaha Shirkadda CAMEL FOREX ee Ganacsiga Online-ka ah iyo Sarifka lacagaha
October, 16, 2019 (AO) – Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta gabi ahaanba albaabada u laabay xarumahaa shirkadda CAMEL FOREX oo ah xaruumo ganacsi oo qaab Online ah looga kala Sarifto lacagaha qalaad.
Ciidamada ayaa xiray xarumihii ay shirkaddan ku laheyd Isgoyska Zoobe, Suuqa Bacaad iyo Wadada Maka Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho.
Lama oga ilaa iyo hadda sababta hasse ahaatee howlwadeena CAMEL FOREX ayaa warbaahinta u sheegay in iyaga oo si caadi ah ugu gudajira howl-maalmeedkooad in lagu amray in albaabada isugu dhuftaan xaruumahooda ganacsi.
FOREX Traders ayaa ah Suuqa ugu weyn ee dunida ee lacagaha lagu kala badasho waxaa uu ku dhex shaqeeyaa Internet-ka waa Suuq furan oo sarif ah, dhalanyaro badan ayaa ku soo badanaya isticmaalka adeegan oo macaash badan ka sameeyay.
Xarumaha noocan ah ayaa hadda u muuqda kuwo sii baahaya guud ahaanba gobollada dalka, iyadoo ay jiraan dad Soomaaliyeed oo lacago dhiganaya, kaddibna bishii la siinayo faa’iido leysla ogyahay oo lagu heshiiyay, waxaana jira dad badan Soomaaliyeed oo dhaqaale ka helay ganacsiga noocan ah.
Previous articleWar deg deg ah: Ra’iisul Wasaare Kheyre oo Safar deg deg ah ku aadi doona Washington
Next articleDilal Qorsheysan oo Caawa ka dhacay Caasimadda Dalka ee Muqdisho